Maalinta: Diseembar 14, 2018
Sawirrada Shilalka YHT ee Ankara
Degmada Yenimahalle ee Ankara, 3 waxaa loo dilay shil ka dhacay isku-socodka tareenka xawaaraha sare (YHT) iyo tareenka tijaabada ah, iyo labo tareen ayaa ku dhintay shilka. [More ...]
Prof. Dr. Dr. Albayrak wuxuu ku dhammaaday safarkii ugu dambeeyey
Agaasime ku-xigeenkii hore ee Jaamacadda Ankara (AU) oo ah kuxigeenka Kuliyadda Sayniska, waaxda cilmiga cilmiga cilmiga sayniska iyo cilmiga hawada, oo naftiisa ku waayey shilka YHT ee Ankara. Dr. Berahitdin Albayrak waxaa laga diray safarkiisii ​​ugu dambeeyay. Professor Dr. Albayrak [More ...]
Goobta Goobta Isbaarada Blue Train ee Isbeddelka Ka Dib Shilkii YHT ee Ankara
Kadib shilkii tareenka ee ka dhacay Ankara maanta subixii, Gaadiidka TCDD wuxuu shaaciyey in Tareenka Buluugga ah ee Izmir ilaa Ankara uu ka tagi doono Sincan. Gaadiidka TCDD Inc. waxaa sameeyay [More ...]
Kadib shilkii tareenka ee ka dhacay saldhiga ku yaal Ankara, waxaa jiray carqaladeyn ku yimid adeegga tareenka. Gaadiidka TCDD ayaa beddelay saldhigyada bixitaanka ee tareennada si looga hortago waxyeelaynta rakaabka. Ma waxaa lagu sameeyaa duullimaadyada caasimada? Gaadiidka TCDD [More ...]
Saldhigga Yaanimahalle ee magaalada Ankara ee xarunta u ah marinland, tareen xawaare sare leh oo ka socda caasimadda ilaa Konya isla isla jidka tareenka xawaare sare ku dhacay ayaa ku dhacay tareenka haga. Ka mid ah dadka dhintay ee 9 dadka waa injineero khibrad leh. [More ...]
16 1623 ayaa lumisay nolosheeda
Iyada oo masiibada ku dhacday dhimashada 9 ee Ankara shalay, tirada muwaadiniinta ku naf waayey 'shilalka tareenka' ee hoos yimaada sharciga AKP ayaa kor u kacay 1623. 2018, 24 ee Çorlu iyo 9 ee Ankara ayaa laga badiyay laba nafood. [More ...]
Laga soo bilaabo Wasiirka Gaadiidka Turhan ilaa 'Su'aalaha Soo-saarista'
Shalay magaalada Ankara, Muwaadin 9 wuxuu ku dhintey shil tareen, jawaabta su’aasha ku saabsan sababta Wasiirka Wasiirka Gaadiidka Mehmet Cahit Turhan ayaa heshay jawaab. Wasiirka Gaadiidka Mehmet Cahit Turhan ayaa yiri [More ...]
Agaasimaha Guud ee TCDD Apaydin ayaa Twitter-ka ka tirtira Account
Mid ka mid ah arimaha ugu caansan ee subaxnimadii shalay ee Ankara, 3 9 47 ayaa ku dhintay, dadka XNUMX ku dhaawacmeen ka dib markii shil tareen ah İsa Apaydınxisaabta warbaahinta bulshada [More ...]
Kuxigeenka CHP Niğde Omer Fethi Gurer, 9 qof oo lagu dilay Ankara 86 muwaadiniin ayaa ku dhaawacmay shilka tareenka wuxuu ahaa mid laga fikiro, ayuu yiri. In qaab dhismeedka TCDD la beddelay iyo dariiqa loo maro xorriyadda, hay'addu way ka fogaanaysay mudnaanta iyo [More ...]
Marka la eego baaxadda qorshaha labaad ee maalinlaha ah ee 100 ee uu ku dhawaaqay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, qandaraaska Kanal İstanbul iyo 3 Storey Greater Istanbul Tunnel ayaa la bilaabi doonaa. Wasiirka Erdogan for Vumhurbaşk laba mashruuc waalan Turkiga [More ...]
Arslan wuxuu xasuusiyay inuu ku sugan yahay dalka Shiinaha oo uu weheliyo Afhayeenka baarlamaanka Binali Yildirim si uu uga qeyb galo shirarka qaarkood usbuucii hore. 'Maxaad sameysay si East Express u timaado ajendaha iyo muhiimadda [More ...]
Karabük Iron iyo Iron Works (KARDEMİR) AŞ. Guddoomiyaha guddiga Kamil Güleç, xubin ka mid ah guddiga H. Çağrı Güleç, kuxigeenka maareeyaha guud Mansur Yeke iyo agaasimaha iibka Harun Cebeci, [More ...]